မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း မှ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း မှ
အလုပ် 26 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
Admin Assistant - Only Female
Director of Operations (1)Post
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 2,000,000 - 2,500,000
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
The Director of Operations isaprofessional who manages the daily activities ofacompany by overseeing several departments. They are responsible for directing actions across an organization and direct managers to improve efficiency and reduce costs as needed. This Director of Operations job description template is optimized for posting on online
Chairman Office Secretary (Chinese - Write /Speak)
နိုင်ငံခြား အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 600,000 - 800,000
We are looking for Admin Manager position if you are interested please apply.
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ‌ရေးအလုပ်အကိုင်များ
နိုင်ငံခြား အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ2စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ‌ရေးအလုပ်အကိုင်များ 1 စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ 1 ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ2ဖန်တီးမှုပိုင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပိုင်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 ဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ3အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ7အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 7
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း 26
မန္တလေး 11 ရန်ကုန် 10 မြန်မာပြည်အတွင်း3နိုင်ငံခြား 2
စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ 1 အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား 25
Expats Preferred 16